Ubulungu be-VIP Kuze Kufike ku-30% Isaphulelo Kuyo Yonke Imikhiqizo - Gamepron
Noma yini oyifunayo maqondana nama-hacks, kungani ungahambi ngomzila we-premium? Joyina umndeni we-GamePron ngobulungu be-VIP namuhla bese uzwa ukuthi kunjani ukugenca ngokunethezeka!
I-JUMP TO OKUFUNDIWE
Usuthengile ubulungu? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
10% isigqebhezana somuntu siqu sesaphulelo.
Finyelela kuseva yethu yangasese yokungezwani.
Indima yokuqalisa kuseva yokungezwani.
Qalisa ukwesekwa nosizo.
Ukuqokwa kwamahhala uma kudingeka.
Okhiye bamahhala nokunikezwa.
Sebenzisa iziphakamiso zemikhiqizo.
Ukufinyelela kwe-Beta kumikhiqizo emisha.
Finyelela imikhiqizo eyimfihlo (iyeza maduze
20% isigqebhezana somuntu siqu sesaphulelo.
Indima ye-premium kuseva yokungezwani.
Ukusekelwa kwe-Premium nosizo olusheshayo.
Finyelela imikhiqizo eyimfihlo (iyeza maduze)
30% isigqebhezana somuntu siqu sesaphulelo.
Indima ye-VIP kuseva yokungezwani.
Ukusekelwa okungcono okubaluleke kakhulu nosizo olusheshayo.
Thenga Ubulungu be-VIP in 3 izinyathelo
Ama-Hacks wamageyimu, i-Aimbot, akukho ukubuyisa, i-ESP, iWallhacks nokuningi
Khetha inketho yobulungu oyifunayo
Khetha ezinkethweni ezintathu zobulungu ezihlukile ze-akhawunti yakho ye-GamePron
Izinketho ezithile zobulungu zizonikela ngamazinga ahlukene ezaphulelo, kanti ezinye zizokunikeza nokufinyelela kwe-Beta!
Chuma Ngenkathi Ugenca!
Akekho ongakutshela ukuthi ungayidlala kanjani imidlalo yakho, ikakhulukazi uma usuyilungu le-VIP ngeGamePron
Kungani Ngingasebenzisa Ubulungu be-VIP?
Awufuni ukuzizwa ukhishwa inyumbazane uma kukhulunywa ngama-hacks, lokho okuningi singakuthembisa. Kukhona amathuluzi amasha nezibuyekezo ezintsha ezethulwa lapha eGamePron, yingakho abasebenzisi bethu bengenalutho ngaphandle kwezinto ezinhle abangazisho ngenkonzo yethu. Uma usithokozele isikhathi sakho lapha eGamePron njengelungu elijwayelekile, uzothandana nomcabango wokuba yi-VIP.
Sizosiza amakhasimende ethu ukuphuma lapho kungenzeka khona, noma ngabe uyi-Starter, i-Premium, noma i-VIP ayibalulekile - sizophatha "okukhethekile okungaphezulu" kwe-VIP! Uma ungafuni ukuphuthelwa yiso sonke isenzo lapha eGamePron, zenzele umusa futhi ubhalisele ubulungu bethu be-VIP namuhla!
Ukubhaliswa kwe-VIP kususelwe ebulungwini ukukulethela izinzuzo ngaphezu kwabasebenzisi abajwayelekile.
Ngingakwazi yini ukusebenzisa isaphulelo sami okhiye beviki nabanyanga zonke?
Yebo! Ungasebenzisa isaphulelo sakho kunoma yimuphi umkhiqizo onikezwa lapha ku-GamePron.
Ngikukhansela kanjani ukubhalisa kwami?
Ungakhansela Ubulungu bakho be-VIP ngokuya kuwebhusayithi yeGamePron futhi ulungise izilungiselelo ze-akhawunti yakho. Uzothola inketho ethi "Khansela" ngaphansi kwezilungiselelo zephrofayili, futhi okudingayo ngokuchofoza okukodwa ukuze uzikhiphe ohlwini (kanye nokubhalisa kabusha!). Ungaphinda uthuthukise noma wehlise ubulungu bakho lapha.
Kuyini Ukufinyelela kwe-Beta?
Yilapho sinikeza khona amaLungu e-VIP ithuba lokuhlola amathuluzi angakadedelwa okwamanje, ukuwanikeza iBeta Access njengomphumela.
Kuyini ukuqokwa kwamahhala kokusetha?
Ukukopela kungasethwa wena uma uyilungu le-VIP, konke okumele ukwenze ukusebenzisa amalungelo wakho wokuqokwa kwamahhala.
Ingabe ukubhalisa kwami ​​kuvuselela ngokuzenzakalela njalo ngenyanga?
Ukubhalisa kwakho kuzozivuselela ngokuzenzakalela njalo ngenyanga, njengoba uzobona nganoma yiluphi olunye ubulungu bendabuko obususelwe ekubhaliseni.
Yini okuseva ye-Discord?
Iseva ye-Discord (eyaziwa ngokuthi i-GamePron Special Members) yilapho ungaxhumana khona nabantu abanomqondo ofanayo, futhi ukhulume nabaphathi ukuthola usizo ngokuxhamazela - sinikela nangezipho ze-VIP!
Yiziphi iziphakamiso zomkhiqizo?
Uma uyilungu le-VIP uba nobudlelwano obuseduze nethimba leGamePron, futhi singaphakamisa nokuthi imiphi imikhiqizo ezokufanela kangcono kakhulu.
Kuyini ukuxhaswa kwe-Premium?
Ukusekelwa kwe-Premium kungumuzwa wokusekelwa kwamakhasimende ongafinyelelwa kuphela ngamalungu ethu abaluleke kakhulu. Amathikithi akho osekelo nolayini bezingxoxo bazothola impendulo ngokushesha okukhulu kunanoma ngubani omunye umuntu!
Awesome Imidlalo Hacks Izici